Manodidina ny 200 hatramin’ny 500 dolara na 1.900.000 ariary ny vidin’ny fivarotan-tena hataony amin’ny fampanofana vatana indray mandeha monja. Atao anaty ireny « album photos » ireny moa ny sary izay hampisehoana ireo mpanjifa, araka ny fomba fiasa any Sri Lanka. Ny 9 janoary no nisy tovovavy iray teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato saika hiondrana ho any Sri lanka. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa saika hivaro-tena any amin’io firenena io izy ka tamin’ny faceboook no nahitany ilay asa.
Ramatoa iray 35 taona no mpitady vehivavy gasy hiasa ho any Sri Lanka miaraka amina Sinoa roa lahy. Avy any amin’ny faritany ity vehivavy saika hiondrana ity. Rehefa tafahaona tamin’ilay Ramatoa moa ilay tovovavy dia nentiny nankany amin’ireo Sinoa roa lahy mampitady vehivavy gasy hivaro-tena. Ireo Sinoa no nampiantrano ilay tovovavy ary handefa azy ho any Sri Lanka. Efa misy hotely hivantanany sy trano fiasana any Sri Lanka ho an’ilay vehivavy. Efa nataolotra ny fampanoavana ny alatsinainy 13 janoary 2020 ilay Sinoa roa sy ilay ramatoa ka efa niditra am-ponja vonjimaika any Antanimora avokoa.